O kwere omume ugbu a ịchekwa GIF na DNA nke nje bacteria | Akụkọ akụrụngwa
O kwere omume ugbu a ịchekwa GIF na DNA nke nje bacteria
Naanị izu ole na ole gara aga, anyị nwere ohere ịkọ ihe omimi banyere otu teknụzụ kachasị ọhụrụ nke mmadụ kere, dị ka CRISPR-case.9. Ikekwe aha ahụ adịghị ka ihe ọ bụla nye gị, agbanyeghị, dị ka mkpụmkpụ mkpụmkpụ, gwa gị na ekele maka ya anyị nwere ike ime ụdị 'mkpụrụ ndụ ihe nketa'Nke ahụ n'ime meghere nnukwu ọnụ ụzọ maka ụwa jupụtara na ohere.
N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọganihu ndị a na-ewere dị egwu karịa, dịka eziokwu ahụ bụ na otu ndị ọkà mmụta sayensị si Mahadum Harvard nwetara chekwaa faịlụ GIF na DNA nke nje bacteria, Eziokwu bụ na anyị amabeghị n'ezie uru niile usoro a nwere ike ịnye anyị, ma ọ dịkarịa ala ọghọm ya, dị ka mmụba a na-achịkwaghị achịkwa, ihe ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta amalarị.
1 Ha na-ahọrọ ihe a na-ewere dị ka ihe nkiri mbụ n'ime ụwa nke echekwara na DNA nke nje bacteria
2 N'ihi iji CRISPR-Cas9, ụmụ mmadụ nwere ike ịchekwa data ugbu a na ndụ DNA dị ndụ
3 Naanị ihe dị mkpa bụ ịhazi usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa nke DNA iji nweta ihe ọmụma ndị anyị debeburu na ya.
Ha na-ahọrọ ihe a na-ewere dị ka ihe nkiri mbụ n'ime ụwa nke echekwara na DNA nke nje bacteria
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na n'ezie maka mbido nyocha ndị otu ahụ jiri ụdị data ndị ọzọ rụọ ọrụ, maka ngosipụta nke ihe ịga nke ọma ha kpebiri iji otu n'ime ihe ndị kasị ama GIFs na mbara ala, nke anyị nwere ike ịkọwapụta dị ka ihe nkiri mbụ nke ụmụ mmadụ mepụtara.
Ana m ekwu maka GIF ebe ị ga - ahụ ịnyịnya na-agagharị. Kinddị ihe nkiri kere Eadward Muybridge, nyere iwu, na ugwo nke otutu ego nke oge, site Onwuchekwa, iji gosi na n’otu oge a na-agba ọsọ ịnyịnya, ọ na-ejide ụkwụ anọ ọ bụla n’ikuku.
Dị ka ọ na-eme na ọtụtụ teknụzụ nke mechara gbanwee ụwa, ihe niile na-amalite site na nzọ n'etiti onye billionaire Onwuchekwa y James keene, n’oge ahụ onyeisi oche nke San Francisco Stock Exchange, ebe Lelan Stanford kwuru na n’oge agbụrụ ahụ, ịnyịnya na-edobe ụkwụ ya n’ikuku n’otu oge kpọmkwem ebe James Keene kwenyere na nke ahụ.
N’iburu nke a na nnukwu ego n’azụ ya, Eadward Muybridge wuru otu ngwa e mere baptizim n’aha zoopraxinoscope onye ọrụ ya bụ nke were otutu onyonyo n’usoro iji weghara mmegharị ịnyịnya. N'ihi ya, anyị nwere ụdị ihe nkiri nke ejirila mepụta GIF mbụ echekwara na DNA site na nje bacteria.
N'ihi iji CRISPR-Cas9, ụmụ mmadụ nwere ike ịchekwa data ugbu a na ndụ DNA dị ndụ
N'ịlaghachi n'ọrụ nke otu ndị na-eme nchọpụta si Mahadum Harvard gbakọtara, anyị hụrụ na ha jisiri ike ịchekwa GIF a, dịka e bipụtara ya magazine Nature, na DNA nke nje bacteria na-esi otú a na-egosipụta ihe ekwurula banyere ogologo oge, na DNA bụ ezigbo draịva siri ike ebe ị nwere ike ịchekwa ụdị ozi ọ bụla.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị kwuru banyere nnukwu ohere nchekwa na agbụ DNA nwere ike ịnye, eziokwu bụ na rue mgbe teknụzụ CRISPR-Cas9, ọ dị ka anyị ga-eche ọtụtụ iri afọ iji nwee ike ịchekwa data na agbụ DNA. Obi abụọ adịghị ya, ihe atụ ọhụụ nke otu teknụzụ nwere ike isi gbanwee ụwa, ọkachasị n'oge ụmụ mmadụ na-amalite inwe nsogbu ịchekwa oke data anyị nwere ike iwepụta.
Naanị ihe dị mkpa bụ ịhazi usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa nke DNA iji nweta ihe ọmụma ndị anyị debeburu na ya.
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ndị otu nyocha a rụpụtara bụ ike rụọ ọrụ na DNA site na mkpụrụ ndụ dị ndụ, kama ịbụ ruo ugbu a na e nwetawo ihe yiri nke ahụ ma site na mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ site na mkpụrụ ndụ DNA. Dị ka e bipụtara na NatureO doro anya na ejiri Nucleotides mepụta koodu metụtara pikselụ nke ọ bụla n'ime onyonyo ndị echekwara echekwa.
Iji nwee ike ịchekwa data ndị a, ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị ga-ekpebi usoro nke kachasị mma iji chekwaa data a n'ime genome, nke, n'aka nke ọzọ, na-anọchite anya mmelite ọhụrụ maka iji ngwa a. Mgbe ha choro iji weghachite ozi echekwara na DNA nke nje bacteria, ha nwere naanị usoro genome, teknụzụ na-enye ohere ka ị gụọ DNA. Dịka nkọwa ikpeazụ, ekwesiri iburu n'uche na n'oge ule a 90% usoro ziri ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » O kwere omume ugbu a ịchekwa GIF na DNA nke nje bacteria
Huawei Band 2 weghachite ihe dị mkpa nke ọla aka